Kitra – «Mondial U17» : tompondaka i Angletera, nody maina i Mali | NewsMada
Kitra – «Mondial U17» : tompondaka i Angletera, nody maina i Mali
Nifarana tamin’ny fomba ofisialy? ny asabotsy 28 oktobra lasa teo, tao amin’ny kianja Calcutta, Inde, ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, ho an’ny sokajy zandriny U17, taranja baolina kitra. Nahazo ny anaram-boninahitra, tamin’ity, ry zareo Anglisy ary nandrombaka ny medaly volamena.
Resin’izy ireo, tamin’ny isa 5 no ho 2, teo amin’ny lalao famaranana, ny Espaniola. Efa tany amin’ny fizaram-potoana faharoa Anefa vao nahazo ny fandresena i Angletera. Nitarika, tamin’ny isa 2 no ho 0? mantsy ny Espaniola vao nanenjika ny Anglisy. Baolina tafiditr’i Sergio Gomez, teo amin’ny minitra faha-10 sy ny teo amin’ny faha-31 mn-n’ny fizaram-potoana voalohany. Efa tany amin’ny 1 mn tsy hialana sasatra kosa vao nahafaty baolina ny Anglisy, tamin’ny alalan’i Brewster. Io isa 2 no ho 1 io no nentin’ny roa tonta niala sasatra. Nanao totoafo ny fanafihan’ny Anglisy, taorian’ny fialan-tsasatra ka nisesy ny baolina tafiditr’izy ireo. Nosahalainy ho 2 no ho 2 ny isa, teo amin’ny minitra faha-58, rehefa nahafaty baolina i Gibbs-White. Mbola nanampy roa indray avy eo i Foden, teo amin’ny minitra faha-69 sy 88 ary ny an’i Guehi, teo amin’ny minitra faha-84. Voalohany teo amin’ny tantarany ny nahazoan’ny Anglisy ny tompondaka eran-tany, ho an’ny sokajy U17.
Tsy nisy medaly
Tetsy ankilany, nody maina ny Voromaherin’i Mali, raha niady ny laharana fahatelo tamin’i Brezila. Lavon’ny Brezilianina, tamin’ny isa mazava, 2 no ho 0? ry zalahy. Norombahin’ny brezilianina, araka izany? ny medaly alimo, teo amin’ny fiadian-toerana. Baolina roa, maty teo amin’ny fizaram-potoana faharoa avokoa ireo. Ny voalohany, nampidirin’i Alan, teo amin’ny minitra faha-55 ary ny an’i Yuri, teo amin’ny minitra faha-88.
Toy ny tamin’ny manasa-dalana, tena nahavoa azy ireo ny tsy fahampian’ny fahamatorana teo amin’ireo mpilalaon’i Mali. Lohalaharana, tsy mahay mamono baolina ary vodilaharana, mitavozavoza.